Abavelisi base China Igumbi lokuhlambela iSphon Brass Luxury Lavatory Bottle Trap Drain kunye nabathengisi | Jiyida Sanitary
Inkunkuma yeNkunkuma yeSiphon Brass Luxury Lavatory Bottle Trap Drain
IJYD402G 1 1/4 ”
ISIGQIBO Brass SIPHON ibhotile yomgibe
IZINTO UMBHOXO WOBHASI WENKONZO YENKCUKACHA YOKWENZA OKANYE YOMBHOXO
Ukhetho olukhulu lwe-China Drain, Izinto zegumbi lokuhlambela, Njengomzi mveliso onamava nathi siyayamkela inkqubo eyenziwe ngokwezifiso kwaye siyenze ifane nomfanekiso wakho okanye isampulu echaza imigaqo kunye nokupakisha uyilo lwabathengi. Eyona njongo iphambili yenkampani kukuphila kwimemori eyonelisayo kubo bonke abathengi, kunye nokuseka ubudlelwane beshishini lokuphumelela ixesha elide. Ngolwazi oluthe kratya, qiniseka ukunxibelelana nathi. Kuluvuyo lwethu olukhulu ukuba ungathanda ukuba nentlanganiso yobuqu e-ofisini yethu.
Uphuhliso lwethu luxhomekeke kwizixhobo eziphambili, iitalente ezigqwesileyo kunye nemikhosi yetekhnoloji eqiniswa ngokuqhubekayo kwixabiso le-2019 ethengisa ixabiso eliphakathi e-China e-Luxury Lavatory P Trap nge-Chrome Plated Finishing, Umgangatho ophezulu uya kuba yeyona nto iphambili kulo mbutho ukuze uvele kwabanye abakhuphisana nabo. Ukubona ukuKholwa, ufuna ulwazi oluthe kratya? Uvavanyo nje lwezinto zalo!
Ixabiso le-2019 elithengiswayo i-China Siphon, i-Bottle Trap, Ukuvumela abathengi ukuba bazithembe ngakumbi kwaye bafumane inkonzo ekhululekile, siqhuba inkampani yethu ngokunyaniseka, ukunyaniseka kunye nomgangatho ophezulu. Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba kukuvuyela kwethu ukunceda abathengi ukuba baqhube ishishini labo ngempumelelo ngakumbi, kwaye neengcebiso zethu ezinamava kunye nenkonzo inokukhokelela kukhetho olufanelekileyo ngakumbi kubathengi.
Egqithileyo Inkunkuma yeBhafini kunye nokuPhuphuma kweBrass yeBhafu yeTyhubhu yokuhambisa amanzi
Okulandelayo: I-Brass Slip yeZiko eliDibeneyo leNkunkuma
Ibhotile yeBhotile yomgibe
Ubhedu P Trap
Brass Luxury Lavatory Bottle G Trap for Hlamba Ba ...
Umjikelo oMnyama oMileyo kunye noMgqomo oMileyo oMdaka u-R ...
Ujikeleze kwaye uthe tye kwiBarrel Shape Drainer Round Trap
I-Brass Square Siphon Drainer Lock kunye nezikrufu